जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुल्यो, आवेदन कति गर्ने ? कति पुग्ला मूल्य ? | Ratopati
इजाजतप्राप्त नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये दोस्रो आईपीओ जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण शेयर (आईपीओ) को बिक्री खुला भएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि सो शेयरका लागि आवेदन खुला भएको हो ।
जनरल इन्स्योरेन्सले आफ्नो ७० करोडको जारी पुँजीलाई १ अर्बको चुक्ता पुँजी बराबर पु-याउन ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो । सो शेयरको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआईबीएल क्यापिटलले गरेको छ ।
३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता शेयरमध्ये जनरल इन्स्योरेन्सले १ लाख २० हजार कित्ता शेयर आफ्ना कर्मचारीलाई र १ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई छुट्याइएको छ । बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्री हुनेछ ।
अहिलेको बाँडफाँट प्रणाली अनुसार सो शेयर कुल २ लाख ७३ हजार जनालाई १०–१० कित्ताको दरले वितरण हुन सम्भव हुनेछ । सोभन्दा कम आवेदक भएमा मात्रै सो शेयर २० कित्ता वा सोभन्दा बढी पाउने सम्भावना हुन्छ ।
तर, आईपीओ आवेदनको इतिहास हेर्दा पछिल्लो दिनमा कुनै पनि शेयरमा योभन्दा कम आवेदन परेको नदेखिएका कारण यो शेयरमा पनि १० कित्ता भन्दा बढी बाँडफाँट हुने देखिँदैन ।
यस्तो छ इन्स्योरेन्सको समग्र अवस्था
२ वर्षअघि स्थापित जनरल इन्स्योरेन्सले हाल देशभरका ३९ शाखामार्फत् देशभर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ । जनरलले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३३ करोड रुपैयाँको बीमाशुल्क संकलन गरेर पनि घाटामा रहेको कम्पनीले २०७६/७७ मा भने २.२५ रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर आम्दानी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।